नेपाललाई घातक बन्न सक्ने पिएनजीका पाँच खेलाडी | Hamro Khelkud
नेपाललाई घातक बन्न सक्ने पिएनजीका पाँच खेलाडी
एजेन्सी – नेपालले आइसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँग त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्नुअघि पपुवा न्युगिनी(पिएनजी) सँग दुई ओडिआई खेल खेल्दैछ । नेपाल र पिएनजीबीचको पहिलो खेल मंगलबार ओमानको अल अमरेत क्रिकेट मैदानमा नेपाली समय अनुसार बिहान ११:१५ बजे सुरु हुनेछ ।
पिएनजी आइसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमान र स्कटल्यान्डसँग त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज र टि२० विश्वकपको लागि ओमानमा आएको छ । नेपाललाई दुवै खेलमा पराजित गर्दै उच्च मनोबलका साथ त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न चाहन्छ । पहिलो पटक टि२० विश्वकप खेल्न लागेको पिएनजीको मनोबल उच्च छ ।
नेपाल र पिएनजीले पहिलो पटक ओडिआई खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । पछिल्लो पटक नेपाल र पिएनजीले २०१८ को एकदिवसिय विश्वकप छनोट अन्तर्गत प्लेअफमा जिम्बावेमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेपालले पिएनजीलाई ६ विकेटले हराउँदै ऐतिहासिक ओडिआई मान्यता प्राप्त गरेको थियो । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाल २०१५ मा पिएनजीसँग दुबै खेलमा पराजित भएको थियो ।
विश्वकप लिग–२ मा ८ खेल खेलेको पिएनजीले जितको खाता खोल्न सकेको छैन । नेपालले ४ खेलमा २ मा जित र २ मा हा बेहोरेको छ । पिएनजी र नेपालबीचको दोस्रो खेल भदौ २५ मा हुने छ । पिएनजीका प्रमुख पाँच खेलाडी जो नेपाललाई घातक बन्न सक्छन् ।
५. नोसैना पोकना
२५ वर्षिय नोसैना पोकना पिएनजीका बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर हुन् । उनले १४ ओडिआईमा २० विकेट लिएका छन् । २० लिष्ट ए खेलमा ३० विकेट लिएका छन् । उत्कृष्ट प्रदर्शन ३–२५ छ । इकोनमी ४.७० मात्र छ । उनले १९ टि२० आई खेलमा १९ विकेट लिएका छन् ।
ओमानको पिच तीव्र गतिका बलर सहयोगी मानिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाली टोलीमा कुशल मल्ल बाहेक अन्य बायाँ हाते ब्याट्सम्यान छैनन् । जसले गर्दा पनि पोकना नेपालविरुद्ध खेलमा हाबी बन्न सक्छन् ।
२८ वर्षिय लेगा सियाका पिएनजीका ओपनर हुन् । ओपनर लेगा सियाका क्लासिक ब्याट्सम्यान हुन् । उनी पावर हिटर ब्याटिङका लागि पनि चर्चित छन् । फिल्डिङ मार्फत पनि खेललाई परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छन् । लेगाले २५ ओडिआईमा १ शतक सहित ४ सय ७१ रन बनाएका छन् । उनले ४६ लिष्ट ए मा ३ शतक र ३ अर्धशतक सहित कुल ९ सय ९१ रन बनाएका छन् । पार्टटाइम मध्य गतिका बलर पनि हुन् । उनले राम्रो सुरुवात दिँदै टोलीलाई बलियो योगफलमा पुर्याउन सक्छन् ।
३. नर्मन भानुआ
२७ वर्षिय नर्मन भानुआ पिएनजीका प्रमुख तीव्र गतिका बलर हुन् । उनको बलिङमा पेश र स्वींग छ । प्रतिघण्टा १ सय ३५ किलोमिटरमाथिको स्पीडमा बलिङ गर्ने उनी योर्कर बलका लागि पनि सिपालु छन् । पिएनजीलाई पहिलो पटक टि२० विश्वकपमा पुर्याउन उनको योगदान महत्वपूर्ण थियो । उनले २३ ओडिआई खेलमा ३४ विकेट लिएका छन् । ईकोनमी ५.०९ छ । उत्कृष्ट प्रदर्शन ४–२४ छ ।
२५ टि२० आई खेलमा ३५ विकेट लिएका छन् । जसमा एक ह्याट्रिक सामेल छ । उत्कृष्ट प्रदर्शन ५–१७ छ । ३९ लिष्ट ए मा ५७ विकेट लिएका छन् । उनी तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । ओडिआईमा २ सय ५४ र टि२० आईमा ३ सय २१ रन बनाएका छन् । उनले ब्याटिङ मार्फत पनि खेल जिताउन सक्छन् । ओमानको पिचपनि उनलाई सहयोग मिल्ने छ । नर्मन भानुआ नेपाललाई घातक बन्न सक्ने पिएनजीका हतियार हुन् ।
२. टोनी उरा
टोनी उरा पिएनजीका प्रमुख ब्याट्सम्यान हुन् । ३१ वर्षिय विकेटकिपर ब्याट्सम्यान उरा पिएनजीबाट टि२० आईमा शतक प्रहार गर्ने एक्लो खेलाडी हुन् । उराले २०१८ मा आयरल्यान्डविरुद्ध ओडिआईमा १ सय ४२ बलमा १० चौका र ६ छक्का सहित १ सय ५१ रनको उत्कृष्ट शतकीय इनिङ खेलेका थिए । उराले आफ्नो उत्कृष्ट ब्याटिङमा टोलीको जित सहज बनाउन सक्ने क्षमता राख्छन् ।
उनले २६ ओडिआई खेलमा उराले १ शतक र २ अर्धशतक सहित कुल ७ सय १८ रन बनाएका छन् । जसमा ६१ चौका र १९ छक्का सामेल छ । २३ टि२० आई खेलमा उराले १ शतक र ४ अर्धशतक सहित ६ सय ७१ रन बनाएका छन् । ५४ चौका र ३१ छक्का सामेल छ । ४४ टि२० खेलमा २ शतक र ६ अर्धशतक सहित कुल १ हजार २ सय ६४ रन बनाएका छन् । उनको प्रदर्शनले पिएनजीलाई निकै प्रभाव पार्ने छ । उनी राम्रो लयमा पनि छन् । पिएनजीको टि२० घरेलु प्रतियोगिता उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चुनिदै ओमान आएका उरा नेपाली बलरलाई निराश बनाउन सक्छन् ।
१. असाद भाला
कप्तान असाद भाला पिएनजीका प्रमुख हतियार हुन् । पिएनजीलाई ओडिआई मान्यता दिलाउन र पहिलो पटक टि२० विश्वकपमा पुर्याउन उनको योगदान महत्वपूर्ण छ । शीर्षक्रममा ब्याटिङ गर्ने भाला स्पिन बलिङ गर्ने गर्दछन् । भालाले २७ ओडिआई खेलमा १ शतक र २ अर्धशतक सहित ७ सय ३९ रन बनाएका छन् ।
बलिङतर्फ ओडिआईमा २७ विकेट लिएका थिए । ६२ लिष्ट ए खेलमा भालाले २ शतक र ८ अर्धशतक सहित कुल १ हजार ७ सय २२ रन बनाएका छन् । पछिल्लो पटक २०१९ मा नामिबियाविरुद्ध ओडिआईमा उनले १ सय ४ रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए । भाला गतवर्ष आइसीसीको दशककै उत्कृष्ट खेलाडीको मनोयनमा परेका थिए ।
३४ वर्षिय भाला आफ्नो अनुभवको फाइदा उठाउँदै कठिन समयमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छन् । पिएनजीको नतिजालाई उनको प्रदर्शनले प्रभाव पार्ने गर्दछ । उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका भाला नेपाललाई घातक बन्न सक्छन् ।